Isikole - iSearch
Njalo ngonyaka ehlobo, abantwana abangaphezu kwesigamu sezigidi (kanye nabazali babo) baqala isigaba esisha sokuphila ngokufunda kwabo. Kulabazali, ukungena kwesikole akuyona nje isinyathelo esingokomzwelo - emva kwalokho, kufanele bavumele izingane zabo zihambe kancane kancane emva kwezingane zokubeletha kanye ne-kindergarten. Abazali abaningi bakhathazekile futhi ngomkhuba wansuku zonke osanda kuhlelwa futhi umbuzo wesifiso sokufunda esifanele. Kodwa ngokulungiselela kahle kanye nemishini efanele yesikole wena nomntanakho uzokwazi ukubhekana nezinselelo ezintsha!
Ungazisiza kanjani izingane ukuthola indlela yazo esikoleni?
Umbuzo oyinhloko manje ungamsiza kanjani ingane yakho ukuba ingene ngosuku lokufunda. Umnyango wesikole udinga ushintsho olukhulu oluvela ezifundweni zasesikoleni samabanga aphansi. Ekugcineni, omunye akakhulumi esikoleni ngokuthi "ukungathí sina kokuphila". Ingane yakho manje izoba nesiyalo esingaphezulu kunalokho okwakunjalo enkulisa. Ikakhulukazi ngesikhathi sokuqala, lesi sigaba sokulungiswa sizohambisana nesidingo esengeziwe sokuzilibazisa nokudlala isikhathi. Amasu alandelayo angakusiza wenze ushintsho lube lula kumntanakho:
Ayikho isimiso esigcwele
Uma ingane yakho icela uhlelo lokuzijabulisa olugcwele ngesikhathi sakhe samahhala enkulisa, okuphambene nakho manje kungaba njalo. Ukuhlushwa nokuqondiswa okudingekayo ekufundiseni, kanye nohlaka oluqinile lokufundisa, kungabangela isidingo esikhulu sokuzijabulisa. Gcina uhlelo lokuzilibazisa lucacile futhi uvumele ingane yakho isikhathi esengeziwe sokudlala mahhala nokuzilibazisa. Akufanele uhlele izinsuku ezingaphezu kwezinyanga ezimbili ezihleliwe zeqembu lezemidlalo noma izifundo zomculo ekuqaleni.
Umkhuba wansukuzonke oqhubekayo
Ukuze ujwayeze ingane yakho ngosuku lwesikoleni, kufanele unikeze usuku oluhleliwe. Isikhathi esiphezulu somsebenzi wesikole nokudlala sizovumela ingane yakho ukuba isetshenziselwe isimiso esisha kalula. Kudla kwasekuseni kwengane kuhlelwe usuku lokuqala losuku.
Abazali abaningi basebenzisa amahora abo okusebenza futhi futhi emnyango wesikole wengane. Kodwa-ke, ngisho noma ukunakekelwa kwezingane kuhlelwe kahle, ukugula kwengane kungaphazamisa kakhulu umsebenzi wosuku. Ngakho-ke kululeka ukusetha uhlelo lokubhekana nesimo ngesikhathi sesifo. Uma kungenabo ugogo nomkhulu otholakala ukusiza ngesikhathi esifushane, ukunakekelwa kwezimo eziphuthumayo kungenzeka kwenzeke ngenkonzo yomndeni manje ehlinzekwa emadolobheni amaningi.
Ngokubamba iqhaza emihlanganweni yabazali, uzokwazi izingane, abazali nabafundisi, bazokwaziswa ngezenzakalo ezizayo zesikole futhi bazokwaziswa mayelana nokusebenza kanye nezinkinga zomntwana wakho ngesikhathi sokuqala. Ukuze ukwazi ukuthatha izithakazelo zezingane nokubathonya ngaphezulu, ungaphinda uhlanganyele njengomzali.
Imishini efanele yesikole
Imishini efanele yesikole ibaluleke kakhulu kubaqalayo besikole. Lihlangabezana i-Dötzchen asigcini nje ngokulalela okushiwoyo yokuziqhenya ngayo ekugcineni basonta Omkhulu. Kubuye kukhuthaze injabulo yokufunda. Akukhona nje ngenxa yalesi sizathu, ingane kufanele ifakwe ekukhetheni kwe-Ranzens. Ngaphezu kwalokho, ukuba khona ingane uma uthenga i-Isikhwama Kubalulekile futhi ukuqinisekisa ukuthi kahle hle bazivumelanisa isimo somzimba ingane yakho. Ngokuphathelene ubukhulu nesisindo phakathi onobuhle ahlukahlukene umehluko omkhulu ukuthi kufanele kubhekwe ukuze ugweme ukuma okubi phakathi kwabanye. kodwa esihlalweni futhi ubukhulu isikhwama ke kubalulekile ukuqinisekisa okuhle yonke-round umbono wengane endleleni. I-satchel ihlezi kahle lapho inqenqemeni yayo ephezulu ingqimba kuya ekuphakameni kwehlombe. Ukuze uthole i-ergonomic fit, kufanele futhi abe eduze komzimba. Ezinganeni ezakhelwe kahle, kunezibonelo ezilula futhi ezilula. Noma kunjalo, umkhiqizi akufanele alondoloze ekuzinzeni ukufeza isisindo esincane. Ukuvikela amabhuku okukhwabanisa amabhuku noma ama-satcheli amancane ngokuvamile ahlonywe nge-plastic inlay. Uhlelo olunjalo lungabuye lengezwe kamuva. Kuzo zonke zindlela ukuze kubhekwe kodwa umuntu akufanele sikhohlwe: Kusukela izikhwama esikoleni kunyaka ozayo kuyoba nabangane nsuku zonke ingane yakho, kufanele zihilelekile ngempela endabeni yokukhetha imodeli kanye umbala. Noma kunjalo, kunconywa ukuba ugweme izisusa ezincike kakhulu futhi ezisekelwe emfashini. Ethandwa namuhla cartoon uhlamvu angase kusasa ayisekho imfashini, futhi neze abe yisisulu nokugconwa.
Amathiphu awusizo ekuthengeni izidingo ezifanele zesikole ukukunikeza umhlahlandlela wethu!
Ngaphandle & Amatende
isearch - April 7, 2020 0
Yini inombolo ephambili? Amanani amakhulu ahlala ekhona futhi azoqhubeka nokuba khona. AmaGrikhi asendulo ayevele akhangwa yi ...
Okthoba 31, 2017
Okthoba 26, 2017
Ukudla nokunakekelwa isearch - Okthoba 4, 2017 0
Uma kuziwa ekuphambeni, izinsana zivame ukuzijabulisa. Emanzini afudumele, izandla ezincane zingashintsha ...
Ukudla nokunakekelwa isearch - Okthoba 3, 2017 0
Ukusiza Izinsana Ukondla Nge-Milk Pump Ngaphambi kokuthi uthenge zonke izinto zomntwana, umzimba wakho usevele uyasebenza ...
Ukuzilibazisa nokuhamba isearch - Okthoba 5, 2017 0
Kulezi zingane, akukho lutho olungcono kunazo zonke kunokuba ugijimise ngesimo sezulu. I-swing baby impela ...
Ukuzilibazisa nokuhamba isearch - Okthoba 1, 2017 0
Abazali abasha ikakhulukazi bayakwazisa ukuhamba okuphezulu ikakhulukazi. Manje kuyisidingo esiyisisekelo ekuphileni okubuhlungu kakhulu kwansuku zonke nengane. Kodwa ngonyaka wokuqala wokuphila ...
Ukuzilibazisa nokuhamba isearch - September 30, 2017 0
Uma ingane isuka emntwaneni, kuyadingeka idivayisi entsha. Phakathi naleso sikhathi isithuthi somntwana sasincane kakhulu futhi akunakwenzeka ...
Ukuzilibazisa nokuhamba isearch - September 29, 2017 0
Isikhwama sokulala noma isicathulo sokusetshenziswa kwangaphandle sekuyisikhathi esiyimfuneko emkhakheni wemishini yamatende. Basebenza njengengxenye esikhundleni se ...
Ukuzilibazisa nokuhamba isearch - September 18, 2017 0
Uma abazali, noma labo asebekhona kakade, umbuzo uphakamisa ukuthi ngabe umntwana usondelene yini nokuthi iyiphi imodeli efanelekile.
Izinsana ikakhulukazi zichitha isikhathi esiningi zilele. Balala embhedeni kuze kube ngamahora angu-20. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthenga ingane efanelekayo. Lo mhlahlandlela uhlose ukunikeza ukubuka konke, ukukufundisa ngemikhiqizo efanelekile, ukwethula ukuhluka okuhlukile, nokukukhombisa ukuthi yini ...
Izinsizakalo Zesisindo Sezingane Usizo oluningi Izinsana ezisanda kuzalwa zidinga indawo enobuqili, ethule ukuze zilele. I-cradle yindawo engcono yokulala ezinyangeni ezintathu zokuqala. Ngaphezu kombhede oseceleni kanye ne-bassinet, i-cradle inikeza izinzuzo eziningi. Ngokungafani nombhede oseceleni, oqonde embhedeni ...
Izingane edeskini esihlalweni
Isihlalo sedeski lezingane - izingane ezisebenzayo nezitayela ziyakhula futhi zidinga ifenisha eqinile. Kuhlale kuyinselelo kubazali ukuthola ifenisha eyiyo efanele ukukhula kwengane. Ikakhulu isihlalo sokuhlala kufanele silinganiswe ngosayizi nesisindo sengane. Isihlalo ...
Ngokushesha kungenzeka kube manje futhi isizukulwane esilandelayo sisendleleni. Abazali abaningi bayesaba umsebenzi omusha, kodwa kukhona futhi injabulo enkulu nokulindela. Kubazali kukhona okuningi okumelwe bakwenze ngakho-ke amakamelo abantwana kufanele ahlelwe ...
esikoleni isearch - April 7, 2020 0
ukuvikeleka isearch - Okthoba 26, 2017 0
ukuvikeleka isearch - September 24, 2017 0
ingalo yamabhola antantayo
ukuvikeleka isearch - September 20, 2017 0
ukuvikeleka isearch - September 13, 2017 0
ukuvikeleka isearch - September 9, 2017 0
isearch - Okthoba 13, 2018 0
Nguwe umphathi esizeni sokwakha! Ngomthwalo wesondo we-LENA Worxx ongakwenza olwandle, nasekhaya, enkulisa noma eSandpit, ...
I-Sango sea coral
isearch - Okthoba 31, 2017 0
isearch - Okthoba 30, 2017 0
123...28Ikhasi le-1 le-28